အမွှာလည်ဘို့စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ | slot Fruity £5+ £ 500 အခမဲ့! အမွှာလည်ဘို့စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ | slot Fruity £5+ £ 500 အခမဲ့!
ဒီမြှင့်တင်ရေးအကြားတက်ကြွဖြစ်လိမ့်မည် 00:01 12/01/2018 နှင့် 23:59 14/01/2018 . BST / ဂရင်းနစ်စံတော်ချိန် ACST ၏ညီမျှသည် -8.30hrs, PTZ + 8နာရီ
ဆုကြေးငွေများအတွက်အရည်အချင်းပြည့်မီဖြစ်, ကစားသမားများကဒီအီးမေးလ်ကိုလက်ခံရရှိနှင့်ဆုကြေးငွေကုဒ်သုံးပြီး£ 10 နိမ့်ဆုံးငွေသွင်းကြရပါမည်: TS20 ၏တစ်ဦးကဆုကြေးငွေ 20 လှည့်ဖျားသင့်အကောင့်မှဆက်ပြောသည်လိမ့်မည်.
ဤရွေ့ကားဗိုင်းငင်တစ်ဦးချင်းစီ၏အမြင့်ဆုံးကိုရရှိပါလိမ့်မယ် Deluxe ကစားသမားလှည့်ဖျားအမွှာအပေါ်£ 0,10 တန်ဖိုးရှိနှင့်တရားဝင်ဖွစျလိမျ့မညျ 20 အပိုဆုအတွက်မြှင့်တင်ရေးကာလအတွင်းအတွင်းသူတို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးအပ်ငွေအပေါ်£ 0,10 အပေါ် spins.
သာသင့်ရဲ့အာမခံလိုအပ်ချက်များကိုဆီသို့ဦးတည် contirbute slot ကဂိမ်းအပေါ် wagering. ဆုကြေးငွေရန်ပုံငွေကနေအများဆုံးကူးပြောင်းငွေပမာဏ 4X မှာချီးမြှင့်ဆုကြေးငွေပမာဏကိုမိနစ်မှာပါလိမ့်မည်.
ထိုအာမခံမီကရန်ပုံငွေဆုတ်ခွာပြီးပြည့်စုံသည်အကောင့်အားလုံးကိုဆုကြေးငွေနှင့်ဤ attribute ရဲ့ဆိုအနိုင်ရရှိကိုပယ်လိမ့်မည်. ပြီးတာနဲ့သင့်ရဲ့အပိုဆုလှည်ခိုင်လုံသောဖြစ်နေဆဲအသိအမှတ်ပြု7နေ့ရကျ.
သငျသညျဤကာလအတွက်အာမခံလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်စွက်မထားသင့်, ဒီမြှင့်တင်ရေးအနေဖြင့်မည်သည့်ကျန်ရှိနေသောပြောင်းလဲဆုကြေးငွေရန်ပုံငွေများပြီးနောက်သင့်အကောင့်မှဖယ်ရှားပစ်မည် 28 နေ့ရကျ.
ကစားသမားတစ်ဦးတည်းသာဆုကြေးငွေတစုံတယောက်သောသူသည်အချိန်မှာတက်ကြွဖြစ်နိုင်သည်ကိုသတိပေးနေကြပါတယ်. သင့်ရဲ့တစျခုလုံးကိုဆိုင်းငံ့ဆုကြေးငွေတန်းစီပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့ပရိုဖိုင်းကိုအပိုင်းကိုသွား ကျေးဇူးပြု..
စီမံခန့်ခွဲမှုကိုပယ်ဖျက်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်, မဆိုယှဉ်ပြိုင်မှုသို့မဟုတ်မြှင့်တင်ရေးကိုရပ်ဆိုင်းသို့မဟုတ်ပြောင်းလဲ (သိ. သို့မဟုတ်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကို) မည်သည့်အချိန်တွင်နှင့်ကြိုတင်သတိပေးချက်မပါဘဲ. စံ
စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ & အခွအေနလျှောက်ထား.